Hand, Foot, And Mouth Disease (လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ) - Hello Sayarwon
Hand, Foot, And Mouth Disease (လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hand, Foot, And Mouth Disease (လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ)
Hand, Foot, And Mouth Disease (လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ) ကဘာလဲ။
လက်၊ခြေထောက်နှင့် ပါးစပ်ရောဂါ သို့မဟုတ် HFMD ဆိုသည်မှာ မတူညီ သော ဗိုင်းရပ်စ် များကြောင့် ဖြစ်သော ကူးစက်တတ် သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကလေးငယ်များတွင် အဓိက ဖြစ်ပွားသည်။ ပါးစပ်တွင် သွေးစုနာပေါက်ခြင်း၊ လက် နှင့် ခြေထောက်များတွင် အဖုအပိမ့်များထွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဤရောဂါသည် မပြင်းထန်ပါ။ သီးခြားကုသမှု မလိုအပ်ပါ။ ၂ပတ်အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားလေ့ ရှိသည်။ သို့သော်လည်း အချို့ကိစ္စများတွင် ဦးနှောက် အမြှေးပါး ရောင်ခြင်း၊ ပိုလီယို စသော ပြင်းထန်သော ဆိုးကျိုး များကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သေဆုံးသည်အထိ ဆိုးရွားနိုင်သည်။
Hand, Foot, And Mouth Disease (လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရောဂါသည် မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များနှင့် အသက် ၅နှစ် အောက် ကလေးများတွင် အဖြစ်များသည်။ သို့သော် လည်း အသက်ကြီးသော ကလေးများနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီး သူများတွင်လည်း ကူးစက်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ရောဂါ ဖြစ်နိုင်မှုကို နည်းပါးစေနိုင်သည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
Hand, Foot, And Mouth Disease (လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါလက္ခဏာများသည် ထိတွေ့ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း စတင်လေ့ရှိသည်။ အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါးနှင့် တင်ပါးပေါ်တွင် အဖုအပိမ့် များထွက်ခြင်း
သွေးစုနာသည် ပါးစပ်တွင် စပေါက်သည်။ လျှာ၊ သွားဖုံး နှင့် ပါးအတွင်းတွင် ပေါက်သည်။ အဖျား တက်ပြီး ရက်အနည်းငယ်တွင် စတင်သည်။
သင့်ကလေးတွင် အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပေါ်ပါက ဆရာဝန် အား အကြောင်းကြားပါ။
မျိုချရာတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ အရည် မသောက်နိုင်ခြင်း
အဖျားတက်ပြီး acetaminophen နှင့် ရေပတ်တိုက် ခြင်းတို့ဖြင့် မသက်သာပါက
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော လက္ခဏာများ ပိုဆိုး လာပြီး ၂ပတ်အတွင်း သက်သာမလာပါက
Hand, Foot, And Mouth Disease (လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
HFMD ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းမှာ coxsackie virus A16 ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ entero virus 71 သို့မဟုတ် အခြား ဗိုင်းရပ်စ်အချို့ ဖြစ်သည်။ ထိုဗိုင်းရပ်စ်များကို ဝမ်း နှင့် နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းရှိ ခန္ဓါကိုယ်အရည်များတွင် တွေ့နိုင် သည်။ ရောဂါပိုးရှိသော သူ၏ ခန္ဓါကိုယ်အရည်များကို ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် တစ်ယောက်မှ တစ်ယောက်သို့ ကူးစက် ပျံ့နှံ့သည်။
ငါ့ဆီမှာ Hand, Foot, And Mouth Disease (လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
HFMD ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသော အချက်အချို့မှာ
အသက်။ HFMD သည် အသက် ၅နှစ်အောက် ကလေးငယ်များတွင် အဓိက ဖြစ်ပွားသည်။
တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှု နည်းခြင်း။ ၎င်းသည် ခန္ဓါကိုယ်သို့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု အခွင့်အလမ်းကို ပိုများစေသည်။
အများပိုင်နေရာများကို ပုံမှန်သွားခြင်း။ HFMD သည် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါဖြစ်သောကြောင့် လူများစွာဖြင့် အချိန်ကြာစွာ ထိတွေ့ပါက HFMD ကူးစက်နိုင်ချေ ပိုမြင့်ပါသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်စေသော အချက်များ မရှိခြင်းသည် သင့်အား ရောဂါ မဖြစ်နိုင်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဤ အချက်များသည် ကိုးကားချက်သာလျင် ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါ သည်။
Hand, Foot, And Mouth Disease (လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ရောဂါလက္ခဏာများကို စစ်ခြင်း၊ အဖုအပိမ့်များ၊ သွေးစု နာများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ရောဂါအဖြေရှာနိုင်ပါသည်။ စစ်ဆေးရန်အတွက် ဝမ်း သို့မဟုတ် လည်ချောင်းမှ အရည် နမူနာယူခြင်း လုပ်နိုင် သည်။
Hand, Foot, And Mouth Disease (လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါဆိုတာဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
HFMD အတွက် သီးခြား ကုသမှု မရှိပါ။ သို့သော်လည်း ရောဂါ မပျောက်ကင်းမီ အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် လက္ခဏာများကို သက်သာအောင် လုပ်နိုင်ပါသည်။
Acetaminophen သို့မဟုတ် ibuprofen စသော ဆေးများသည် အဖျားကျစေပြီး အနာသက်သာ စေသည်။
နွေးသော ဆားရည်နှင့် အာလုပ်ကျင်းပါ။ (ရေတစ် ဖန်ခွက်လျှင် ဆား ဇွန်းတစ်ဝက်)
Antacids သောက်ပါ။ ထုံဆေး လိမ်းခြင်း သည် ပါးစပ် သွေးစုနာမှ နာခြင်းကို သက်သာစေသည်။
အရည် များများသောက်ပါ။ အဖျားတက်ပါက အရည် ပိုသောက်ရန် လိုသည်။ နို့အအေးသည် အကောင်း ဆုံး ဖြစ်သည်။ အချိုရည် သို့မဟုတ် ဆိုဒါ မသောက်ပါနှင့်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့တွင် ပါသော အက်စစ်သည် ပြည်တည်နာများ ကို နာကျင်စေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်ရန် သီးသန့် မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများသုံးပါ။ ၎င်းတို့ကို ရေနွေးပူစိမ်ပါ။ pacifier နှင့် ပုလင်းနှုတ်ခမ်းကို ပုလင်းမှခွဲ၍ ရေနွေးပူစိမ်ပါ။ ကလေးအား အခြား ကလေးများနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် လက်၊ခြေထောက် နှင့် ပါးစပ်ရောဂါ ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
လက်ဆေးပါ။ အထူးသဖြင့် ကလေးခါးတောင်းကျိုက် ပိတ်စ လဲပြီးနောက် လက်ဆေးပါ။
ညစ်ညမ်းသော မျက်နှာပြင်များကို ဆေးကြောပါ။
ညစ်ပတ်သော အဝတ်များကို လျှော်ပါ။
ရောဂါလက္ခဏာများ ပိုဆိုးလာပါက၊ နှစ်ပတ်အတွင်း သက်သာ မလာပါက ဆရာဝန်အား အကြောင်း ကြားပါ။
သင့်ကလေးကို အခြားသူများနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
အဖျားကျစေရန် acetaminophen တိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် ရေပတ်နွေးတိုက်ပေးပါ။
အသုံးပြုပြီးနောက် ပုလင်းနှုတ်ခမ်း၊ pacifiers နှင့် စားသောက်သည့် အိုးခွက်များကို ရေနွေးပူစိမ်ပါ။
သင့်ကလေးအား ပါးစပ်ကျင်းရန် ဆားရည်နွေးအား အသုံးပြုစေပါ။
အဖျား မကျမချင်း သင့်ကလေးအား အနားယူစေပါ။
သင့်ကလေးအား အရည်များ၊ ပျော့သော အစာများ စားစေပါ။
သင့်ကလေး အဖျားတက်ပြီး acetaminophen သို့မဟုတ် ရေပတ်တိုက် ခြင်းတို့ဖြင့် မသက်သာပါက ဆရာဝန်အား အကြောင်းကြားပါ။
Hand Foot and Mouth Disease | Prevention and Treatment. http://www.cdc.gov/hand-foot-mouth/about/prevention-treatment.html. Accessed Jul 14 2016
Hand, Foot & Mouth Disease. http://www.cdc.gov/features/handfootmouthdisease/index.html. Accessed Jul 14 2016
Hand-foot-and-mouth Disease Treatments and Drugs. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hand-foot-and-mouth-disease/basics/treatment/con-20032747. Accessed Jul 14 2016
Hand-foot-mouth Disease. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000965.htm. Accessed Jul 14 2016